Imiklamo engu-13 yeziFunda eziyi-13 zokonga ezokuVakasha zaseHimalaya
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ze-India Breaking » Imiklamo engu-13 yeziFunda eziyi-13 zokonga ezokuVakasha zaseHimalaya
Izindaba Ezintsha • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Industry Hospitality Industry • Izindaba ze-India Breaking • Izindaba • Ukwakha kabusha • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba Ezihlukahlukene
I-Tulip Garden e-Uttarakhand
Izwe lamagquma i-Uttarakhand, izwe elisenyakatho neNdiya eliwele yiHimalaya, lihlela ukuthuthukisa amaphrojekthi wezokuvakasha ali-13 ezifundeni zawo eziyi-13.
Inhloso yamaphrojekthi ukuhambisa ezokuvakasha zisuke ezingibeni ezingezinhle ngenxa ye-COVID-19 ziye ekuhambiseni okubanzi nokuhle kwezivakashi.
Ukuxhaswa kwalezi zinhlelo kufunwa kuhulumeni kanye nasezinhlanganweni ezizimele zentuthuko.
Njengoba kwenzeka emhlabeni wonke, ezokuvakasha manje sezifuna ukugwema ukugcwala futhi zinikeze izinketho zabavakashi ezinempilo.
Izifunda eziyi-13 zase-Uttarakhand yi-Almora, Bageshwar, Chamoli, Champawat, Dehradun, Haridwar, Nainital, Pauri, Pithoragarh, Rudraprayag, Tehri, Udham Singh Ngar, ne-Uttarkashi. Ingadi ye-tulip esifundeni saseChamoli nase-Astro Park ingeminye yemisebenzi ehlosiwe.
Ezikhathini zamuva eNdiya, njengoba kwenzeka kwenye indawo, bekugxilwe ekubukeni ezokuvakasha ngombono onempilo nokugwema izingibe zesikhathi esedlule ngenxa ye-COVID-19 nakho konke ukuhambisana kwayo kanye nemithelela yayo. I-Uttarakhand ingesinye sezifundazwe zakamuva zokubheka ezokuvakasha ngamehlo amakhulu ukuze imithelela yezokuvakasha ihlale mihle.
Inhloso ukusabalalisa amaphrojekthi ezindaweni ezahlukahlukene ukuze kunciphe ukusebenza kwezokuvakasha. Ukwenza intando kufanele kusize ukususa ukuqoqwa kwezivakashi ezindaweni esezivele zikhona, ngokusho kwezikhulu eziphezulu zezokuvakasha.
I-India Travel Agents kanye ne-Nepal Tourism Board Manje Joyina...
Izindiza ezisuka eMilan ziya e-Rovaniemi nge-easyJet manje
Gubha Amaholide Ajabulisayo e-St. Regis San Francisco
Agasti 8, 2021 ku-20: 07
Asikuvumeli konke ukuphawula. Ukuphawula kwakho kukhuthaze ukugembula ku-inthanethi futhi bekungahlobene nendaba.